“Waxaan ahay madaxweyne, ciyaaryahan & tababare, horyaalkana waan qaadi lahayn haddii aan xilli hore imaan lahaa” – Zlatan Ibrahimovic – Gool FM
(Milano) 08 Luulyo 2020. Zlatan Ibrahimovic ayaa ku kaftamay inuu madaxweyne, ciyaaryahan, macallin ka yahay Milan, isagoo sidoo kale ka dooday da’diisa iyo heerkiisa taam ahaansho.
38-sano jirkaan ayaa rigoore dhaliyey kulankii kooxdiisa Milan ay guul soo laabasho ah 4-2 xalay ka gaartay naadiga Juventus, isagoo mid kalena caawiye ka ahaa.
“Waxaan ahay da’ taasna sir maahan!, da’du waa tiro, waxaan u shaqeynayaa si fiican, waxaana leeyahay dheeli tirnaan, waxaan maanta ciyaaray in ka badan intii aan kulankii hore ciyaaray, waxaan dareemayaa fiicnaan, daacaddii waxaan isku dayayaa inaan kooxda ku caawiyo waddo walba” ayuu Zlatan u sheegay Warsidaha DAZN.
Zlatan ayaa kulankii xalay bedel lagu saaray, waxaana la arkayey isagoo xiddigaha kooxdiisa ka dhiiri-gelinayey kursiga keydka, laga yaabee inuu isku diyaarinayo Tababarennimo.
“Waxaan ahay madaxweyne, ciyaaryahan iyo tababare! Waxa kaliya ee aan ku xumahay waa inaan ciyaaryahan ahaan mushahar ku qaato! Haddii aan halkaan joogi lahaa maalintii koowaad ee xilli ciyaareedka, waxaan ku guuleysan lahayn Scudetto.” ayuu hadalkiisa ku daray Zlatan Ibrahimovic.